Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 18)
Galaxy S10 oo leh 5G wuxuu imaan lahaa xagaaga
Raadi wax badan oo ku saabsan bilaabista nooca Galaxy S10 oo leh 5G kaas oo xagaagan ka dhici doona dalal kala duwan sida Mareykanka.
Xiaomi Mi MIX 3 wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Raadi wax badan oo ku saabsan Xiaomi Mi MIX 3 oo horeyba si rasmi ah looga bilaabay gudaha Isbaanishka qiimo aad u qiimo badan oo ku meel gaar ah.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay daahfurka taleefan Redmi ah oo lala kaashanayo TikTok
Xiaomi waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday, iyada oo loo marayo Weibo, iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeesho TikTok daahfurka nooca Redmi.
Huawei Mate 20 Pro wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo dhowr horumarin ah
Huawei Mate 20 Pro wuxuu helayaa casriyeyn cusub oo nidaamka hawlgalka ah, sida lagu sheegay warbixinno ay bixiyeen isticmaaleyaal kala duwan.
Samsung waxay iskaashi la leedahay Apple si ay u keenaan tiknoolajiyadda AirPlay 2 TV-yadooda
Telefishinada Samsung ayaa noqon doona aaladihii ugu horeeyey adduunka ee taageera Apple AirPlay 2 teknoolojiyada gudbinta macluumaadka wireless-ka.
Xaqiijiyay: Meizu Note 9 wuxuu ku imaan doonaa kamarad Snapdragon 6150 iyo 48 MP
Meizu Note 9 waa taleefanka casriga ah ee xiga ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay. Tani waxay la imaan doontaa kamarad weyn oo ah Snapdragon 6150 iyo 48 MP.
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad ka xakamayso mashiinka dharkaaga Whirlpool mashiinkaaga smartwatch-ka ah ee Wear OS
Soo saaraha qalabka guryaha ee casriga ahi wuxuu ku dari doonaa taageerada Wear OS sanadka oo dhan, wuxuuna noo oggolaan doonaa inaan ku maamulno iyaga oo ka soo jeeda curcurka
Lagu shaandheeyey qaabeynta iyo astaamaha Xiaomi Redmi Note 7 oo leh shaashad aan la jabin karin
Qeyb ka mid ah astaamaha Xiaomi Redmi Note 7 ayaa la daadiyay, marka lagu daro naqshadeynta iyo fiidiyoow muujinaya shaashadeeda aan la jebin karin.
Ka faa'iideyso dalabkan oo ku soo iibso Oukitel U23 kaliya 180 euro
Waqtiga kahor Kirismaska, oo ay weheliyaan iibka dhaca marka ay dhaafaan, ayaa ugufiican ...
LG Q9: Xadka dhexe ee LG waa la cusboonaysiiyay
LG Q9: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee LG oo si rasmi ah loo soo saaray.
Isbedelada aan ku arki doono mobilada Android-ka 2019
Soo ogow isbeddellada waaweyn ee aan ku arki doonno taleefannada Android inta lagu jiro sanadka 2019 waxayna ballanqaadeen inay muhiimad weyn u leeyihiin suuqa sannadkan.
Telefoonada Android ee aadka loo filayo 2019
Ka ogow tusaalooyinkan ku dhufan doona suuqa ku yaal Android 2019 kuna abuuri doona rajo weyn macaamiisha adduunka.
Huawei wuxuu soo bandhigayaa barnaamij u beddelaya muuqaalka wejiga dhawaqyada
Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijka cusub ee Huawei ee loogu talagalay indhoolayaasha oo u beddelaya muuqaalka wajiga codadka indhoolaha.
Video-bixiyaha Huawei P30: tani waxay noqon doontaa dhamaadka-xiga ee sare ee shirkadda
Muuqaalka fiidiyowga ee Huawei P30 ayaa ku daadanaya shabakadda oo ay la socdaan dhowr sawirro. Tani waxay noqoneysaa taleefoonka ugu sareeya ee soo socda ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay.
Sharafta 8A hadda waa rasmi: qeexitaannada, astaamaha iyo qiimaha mobilka cusub
Sharafta 8A ayaa hadda si rasmi ah loo sameeyay oo hadda waxaa loo heli karaa boos celin. Ogow dhammaan qeexitaankiisa, astaamaha iyo qiimaha.
Lenovo Z5s Zhu Yilong Edition Edition waxaa looga dhawaaqi doonaa CES 2019
Nooca 'Zhu Yilong Custom Edition' ee Lenovo Z5s ayaa lagu dhawaaqay in lagu soo bandhigo Bandhigga Macaamiisha ee Las Vegas (CES) 2019.
Alcatel si loo soo bandhigo taleefannada cusub ee CES 2019
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Alcatel si ay u soo bandhigaan taleefannadooda cusub dhacdooyinka caanka ah ee CES 2019 ee Las Vegas.
Gudiga Sony Xperia XZ4 ayaa isbarbar dhigaya iPhone XS Max
Guddiga Sony Xperia XZ4, oo ah taleefanka soo socda ee shirkadda Japan, ayaa la barbar dhigay iPhone XS Max sawirrada.
Xiaomi Mi Power Bank 3: Batariga banaanka ee cusub
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Xiaomi Mi Power Bank 3, bateriga cusub ee dibedda ee sumcadda Shiinaha oo horay si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha.
Meizu wuxuu bilaabayaa beta-ka Flyme OS 7.2: kuwani waa warka
Flyme OS 7.2 waxaa si rasmi ah u sii daayay Meizu oo qaab beta ah. Laga bilaabo maalmaha soo socda, qalabka qaar ayaa laga yaabaa inuu haysto.
The OnePlus 3 iyo 3T waxay ku daadanyaan Geekbench oo leh Android Pie: cusboonaysiinta ayaa dhow
OnePlus 3 iyo 3T ayaa lagu sii daayay bartilmaameedka Geekbench ee ku shaqeeya Android Pie sida nidaamka qalliinka. Tani waxay muujineysaa in dhowaan la cusbooneysiin doono.
LG Q9 iyo Q9 One ayaa bilaabanaya: mid ayaa soo maray Geekbench kan kalena wuxuu soo maray Bluetooth SIG
LG Q9 iyo Q9 One ayaa ka soo baxay khadka tooska ah ee internetka oo ku shaqeeya laba madal oo kala duwan. LG Q9 wuxuu ka muuqday Geekbench iyo Q9 One oo ku yaal Bluetooth SIG.
Snapdragon 855 waxaa lagu qiimeeyaa Geekbench inuu yahay kan ugu dhaqsaha badan SoC
Geekbench wuxuu faahfaahiyay tijaabooyinka lagu sameeyay processor-ka dhamaadka-sare, oo aan cid kale ahayn Qualcomm's Snapdragon 855.
Samsung Secure Folder: Waa maxay iyo sida ay u shaqeyso
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Sanduuqan 'Samsung Secure Folder' iyo utility-ka aad siin karto haddii aad leedahay taleefan summad leh oo shaqadan wata
Xiaomi waxay durbaba ka shaqeyneysaa Xiaomi Mi A3
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xogta ugu horreysa ee Xiaomi Mi A3, jiilka saddexaad ee taleefannada Xiaomi ee u adeegsada Android One sida nooca caadiga ah.
HTC waxay sanadka markale ku xireysaa khasaaro
HTC wali waxay la kulmeysaa daqiiqad xun oo sanadkii todobaad oo isku xigta waxay sanadka ku xiraan qasaaro malyaneynimo oo muujinaya xaaladooda xun.
Apple waxay kala noqotay iPhone 7 iyo iPhone 8 iibkoodii Jarmalka sabab la xiriirta dacwada Qualcomm
Soo saaraha sameeyaha Qualcomm ayaa aad ugu adkeynaya Apple sababtoo ah rukhsadaha soo food saaray labada shirkadood.
LG G8 wuxuu suuqa ku garaacayaa tikniyoolajiyadda codka ee On-Screen
Warbixin cusub ayaa tilmaamtay in LG ay soo saari doonto LG G8 oo leh tiknoolajiyada codka shaashadda. Samsung sidoo kale waxay uga shaqeyneysaa tan mid ka mid ah taleefannadeeda mustaqbalka.
Google wuxuu ku shaqeeyaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee isku laaban: wuxuu noqon doonaa Pixel
Warbixin cusub ayaa soo jeedinaysa in Google uu ka shaqeynayo taleefan casri ah oo mustaqbalka ah: kani wuxuu noqon doonaa Pixel waana uu laaban karaa.
Sawir ah Samsung Galaxy M20 iyo dhowr ka mid ah qeexitaankiisa waxaa xaday FCC
Xog cusub oo la helay ayaa muujisay astaamaha farsamo ee muhiimka ah ee Samsung Galaxy M20. Sawir dhab ah oo aaladda ah ayaa sidoo kale soo ifbaxay.
MIUI 10.2.1 ayaa loo siidaayay Xiaomi Mi MIX 3: dhibaatooyin badan ayaa la xaliyay
Cusbooneysi cusub oo MIUI 10 ah ayaa ku yimid taleefannada casriga ah ee MI MIX 3 ee Xiaomi; tani waxay saxaysaa dhibaatooyin dhowr ah waxayna hagaajinaysaa qaybo ka mid ah.
Faahfaahinta Xiaomi Mi 9, astaanta soo socota ee shirkadda, waa la sifeeyey
Tilmaamaha farsamada iyo astaamaha ugu waaweyn ee Xiaomi Mi 9 ayaa la xaday. Waxay ku imaan doontaa Snapdragon 855, kamarad gadaal seddex ah, iyo inbadan.
Galaxy Note 9 wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo Android Pie ee Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta xasilloon ee gaadhay Samsung-dhamaadka sare, Galaxy Note 9 oo horeyba u heshay Android Pie ee Jarmalka.
Huawei wuxuu ciqaabayaa shaqaalaheeda mas'uulka ka ah tweet-ka "sanad cusub oo farxad leh" iPhone-ka
Loolanka sumcadda ayaa u gudbi kara xag-jirnimada noocaas ah. Tani waa kiiska shirkadda Huawei, oo ku ciqaabtay shaqaalaheeda qoraal ay soo dhigtay barta 'iPhone'.
Nokia 9 horeyba wuxuu u hayaa taariikhda bandhiga iyo qiimaha
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida suurtagalka ah ee Nokia 9 iyo qiimaha ay dhamaadka-calaamaddu ku gaari doonto dukaamada.
Sharafta 8A waxay horeyba u leedahay taariikh soo bandhigid
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida Honor 8A, taleefanka cusub ee ka yimid nooca Shiinaha. Waxaa la sii daayay Janaayo 8 waxaanan haynaa faahfaahin.
Samsung waxay soo bandhigeysaa processor-kii ugu horreeyay ee Exynos oo loogu talagalay gawaarida
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay waxa noqon doona jiilka soo socda ee processor-rada, Exynos V9 Auto
Huawei Mate 30 Pro wuxuu la imaan doonaa shan kamaradood oo gadaal ah, sida ku cad codsi patent xaday
Codsi cusub oo patent dhowaan la helay ayaa muujinaya in Huawei qorsheynayo inuu soo bandhigo Mate 30 Pro oo leh shan kamaradood oo dhabarkiisa ah.
Fiidiyow muujinaya muujinta moobilka Xiaomi
Muuqaal la soo duubay oo muujinaya waxa uu noqon karo taleefanka gacanta ee ugu horreeya ee isku laabma Xiaomi, fiidiyoow aan la xaqiijin karin inuu yahay mid sax ah.
OnePlus 5 iyo 5T waxay helayaan OxygenOS 9.0.1 ka dib markay helaan Android Pie
Oneplus 5 iyo 5T waxay bilaabayaan inay helaan OxygenOS 9.0.1 iyada oo loo marayo cusbooneysiin si tartiib tartiib ah loogu qaybiyo OTA.
Samsung Galaxy M30 ayaa ku daadanaysa kamarad gadaal seddex laab ah iyo batari 5000 Mah ah
Dhowr toddobaad, waxaa jiray xan badan oo ku saabsan mid ka mid ah aaladaha xiga ee ka socda guriga Kuuriyada Koonfureed, kaasoo ...
Tijaabada u adkaysiga biyaha iyo dhibcaha taleefanka casriga ah ee jilicsan ee Poptel P60
Waxaan ku tusineynaa fiidiyoow aan ku arki karno sida ay ugu adkeysan karaan naxdinta, dhicitaanka iyo biyuhu waa Popel P60
UMIDIGI F1: Calanka sumadda cusub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan UMIDIGI F1, astaanta cusub ee sumadda ee aad hadda ka iibsan karto qiimaha ugu fiican Aliexpress. Hada la heli karo
Huawei Y5 Lite: Nooca cusub ee casriga ah ee Android Go
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Huawei Y5 Lite cusub, taleefanka labaad ee sumadda ee leh Android Go. Ogow qeexitaankiisa buuxa.
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa nooc cusub oo ka mid ah heerka Redmi 10-ka Janaayo
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee gudaha Xiaomi's Redmi oo si rasmi ah loogu dabaaldego 10-ka Janaayo.
19% dadka isticmaala waxay ku qarashgareeyaan in ka badan 400 euro mobilada
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iibka nooca mobilada ee in kabadan 400 oo euro, oo wali ay ku badan yihiin Apple oo leh suuq yar
Sony waxay soo bandhigeysaa nidaamka aqoonsiga wajiga adduunka ee ugu horumarsan taleefannada
Sony waxay ka shaqeyneysaa jiil cusub oo tiknoolajiyad aqoonsi wajiga ah oo laga heli karo taleefannadooda dhammaadka 2019.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha Diseembar 2018, sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keenaysaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan bishii Diseembar ee sanadkii hore. Waan ku tusaynaa!
Telefoonka Samsung ee laaban karo si caalami ah looga bilaabo
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah inay soo saaraan taleefannadooda isku laabma ee caalami ah dhammaadka sanadkan.
Dhibcaha Sony Xperia XZ4 ee AnTuTu - waa taleefankii ugu xoogga badnaa abid!
Sony Xperia XZ4 wuxuu marayaa AnTuTu waxaana laga dhaliyay dhibco ka sareeya dhamaan calamada hada kajira suuqa.
LG wuxuu ku dhawaaqay daahfurka caalamiga ah ee Android Pie ee LG G7 ThingQ
Isticmaalayaasha LG G7 ThinQ waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​cusbooneysiinta 'Android Pie' ee boosteejooyinkooda toddobaad gudihiis.
OxygenOS 9.0.3 waxay u timaadaa OnePlus 6 oo leh dhowr war iyo horumar ah: markaa waad rakibi kartaa
OnePlus wuxuu bilaabay inuu soo saaro cusbooneysiin cusub oo OnePlus 6 dhawaan ah. Cusbooneysiintu waxay u keentaa dhowr horumar oo muhiim ah taleefanka.
Sababaha 9 sababta iibsashada Oukitel U25 Pro ay tahay fikrad aad u fiican
Haddii aad wali go'aansatay inaad iibsato Oukitel U25 Pro, halkan waxaa ah 9 sababood oo ah inaad tixgeliso.
Tani waa sida Huawei Mate 20 Pro u eegi doono casaan
Shirkadda Aasiya ee Huawei ayaa soo bandhigi doonta maalmaha soo socda laba nooc oo cusub oo ah Mate 20 Pro, oo ay shirkaddu rabto inay ku soo jiidato isticmaaleyaal cusub oo aan weli cusbooneysiinin xaruntooda.
Moto G6 Plus wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee bilaabaya in lagu soo bandhigo Moto G6 Plus si rasmi ah gudaha Hindiya.
Tirada isticmaaleyaasha ee ka beddelay Android ilaa iPhone ayaa kordhay 2018
Raadi wax badan oo ku saabsan tirada isticmaaleyaasha leh taleefanka Android ee u beddelay aaladda iPhone-ka ee 2018, sida laga soo xigtay tirooyin cusub.
LG waxay soo saari doontaa kiniin cusub rubuca sanadka ugu horeeya
Ka ogow wax badan oo ku saabsan kiniinka cusub ee dhexdhexaadka ah ee LG uu shaqeynayo lana filayo inuu soo baxo rubuca hore ee 2019.
Galaxy S9 waxay la kulantaa dhibaatooyinka batteriga ka dib markii la cusbooneysiiyay Android Pie
Mar labaad cusbooneysiinta Android ee loogu talagalay Samsung ayaa muujinaya dhibaatooyinka batteriga.
Cusboonaysiinta 'Android Pie' waxay siinaysaa dhibaatooyin Xiaomi Mi A1
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka laga soo saaray Xiaomi Mi A1 ka dib imaatinka cusbooneysiinta Android Pie ee qalabka.
Huawei wuxuu u dabaaldegaa sanadka cusub iphone
Way cadahay inaysan noqon doonin markii ugu horaysay mana noqon doonto kii ugu dambeeyay ee CM ee shirkada casriga ahi adeegsato qalab tartamaya oo uu ku soo qoro barta Twitter-ka
Ku cusbooneysiinta LG G7 ThinQ ilaa Android 9 waxay noqon doontaa mid dhab ah dhowaan
LG waxay ku dhawaaqday in goor dhow aan awoodi doono inaan cusboonaysiinno LG G7 ThinQ nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka Google. Android 9 Pie waa kan!
Beta-kii afaraad ee Android Pie ee loogu talagalay Galaxy Note 9 ayaa hadda la heli karaa
Shirkadda weyn ee Aasiya Samsung ayaa hadda soo saartay beta afaraad oo u dhiganta cusbooneysiinta Android Pie ee loogu talagalay Galaxy Note 9
Codsi kale oo wanaagsan oo lagu soo dejisto muusig bilaash ah mp3
Muuqaal fiidiyow ah oo aan kugu cuno oo aan ku tuso hawlgalka codsi kale oo wanaagsan oo lagu soo dejiyo muusig bilaash ah qaab mp3 ah.
Huawei Y7 Pro 2019, waxay soo bandhigtay heerka gelitaanka cusub shaashad ballaaran iyo batari ka wanaagsan
Huawei waxay rabtay inay soo afjarto sanadka iyagoo soo bandhigaya taleefan heer-gal ah oo cusub. Waxaan ka hadlaynaa Huawei Y7 Pro 2019 oo u taagan shaashadeeda iyo baytarigeeda.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee rasmiga ah ee Nokia 9
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qaabeynta Nokia 9 iyada oo ay ugu mahadcelineyso sawirrada rasmiga ah ee rasmiga ah ee la helay mahadsanid Evan Blass.
Noocyada ugu wanaagsan ee Android One ee 2018
Kala soo bax xulashadan shanta casriga ah ee ugu wanaagsan ee leh 'Android One' oo ah nidaamka hawlgalka ee laga bilaabay dukaamada 2018.
Asus ZenFone 5Z wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee bilaabay inuu ku soo baxo Asus ZenFone 5Z ee waddamada sida Taiwan.
Xiaomi wuxuu cusbooneysiiyaa kamaradda Mi 8 oo leh shaqooyin cusub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota kamaradda Xiaomi Mi 8 oo soo bandhigaysa laba horumar oo muhiim ah oo ku saabsan hawlgalkeeda.
Samsung waxay ku shaqeysaa taleefishin cusub oo raqiis ah oo loo yaqaan 'Galaxy Home smart'
Samsung waxay ka shaqeyneysaa nooc cusub oo ka mid ah Galaxy Home, afhayeenka caqliga badan ee shirkadda, si ay u keento moodal ka jaban suuqa.
Dib u eegid OUKITEL U23
La kulan OUKITEL U23, shaashadda 6.18-inji oo leh darajo, laba kamaradood iyo naqshad qurux badan oo aad uga yar intaad malaynayso
Waa rasmi: Taleefanka Muhiimka ahi wuxuu joojiyaa iibinta
Raadi wax badan oo ku saabsan dhammaadka Taleefanka Muhiimka ah sida ay horeyba shirkadda lafteeda ugu xaqiijisay websaydhkeeda. Telefoonku wuu joojinayaa iibinta.
Sida loo rakibo beta ColorOS 6 beta oo ku saabsan Oppo R15 Dream Mirror Edition
Qeybta dhexe ee 'Oppo R15 Dream Mirror Edition' waxay heleysaa nooca beta ee ColorOS 6 iyada oo loo marayo OTA. Waxaan ku tusaynaa sida loo rakibo.
Ma waxaad raadineysaa hadiyad ka timid Boqortooyada? Kuwani waa 5 taleefoon ee ugu fiican 2018 wax ka yar 400 euro
Ku soo uruurinta 5 taleefoon ee ugufiican ee aad hada ka iibsan karto wax ka yar 400 euro si aad hadiyad aan caadi aheyn uga sameyso Kings.
Xiaomi Mi 9 iyo Mi MIX 4 waxay ku imaan lahaayeen kamarad seddex geesood ah iyo wax ka badan
Qeyb ka mid ah astaamaha Xiaomi Mi 9 iyo Xiaomi Mi MIX 4 waa la sifeeyaa, taas oo u istaagi doonta qalabkooda awoodda badan iyo sedexda kamaradood ee dambe.
Kiisaskaasi waxay na tusayaan naqshadda Sony Xperia L3
Kiisaska qaarkood ayaa la soo daadiyey oo na tusaya naqshadda suurtagalka ah ee Sony Xperia L3, xubinta ku xigta ee Sony L3 kala duwan.
Nokia 9 ayaa la soo bandhigi lahaa bisha Janaayo
Ka ogow wax badan oo ku saabsan macluumaadka cusub ee ay nooga tagayaan waxa noqon doona taariikhda la soo bandhigo ee Nokia 9, oo ah nooca ugu sarreeya dhammaadka.
OnePlus 5 iyo 5T waa la cusbooneysiiyay Android Pie
Kahor dhamaadka sanadka, ragga kujira OnePlus waxay sii daayeen casriyeyn dheer oo la sugayay ee loogu talagalay OnePlus 5 iyo 5T ee Android Pie
Batariga Samsung Galaxy A50 wuxuu noqonayaa kii ugu sareeyay
Faahfaahin cusub ayaa laga helay batteriga Samsung Galaxy A50, kaasoo noqon lahaa 4.000 mAh si loo siiyo taleefankan ismaamul weyn.
Kaydinta la korsan karo lagama heli doono Samsungs oo wata Android Pie
Haddii aad haysato taleefan Samsung ah oo wata 'Android Pie', waxaad horayba ula qabsan kartaa fikradda ah inaadan haysan Kaydsi La Aqbali Karo oo aad ku darto xusuusta.
Galaxy Note 9 wuxuu heli doonaa Android Pie bartamaha Janaayo
Soo ogow taariikhda Galaxy Note 9 la filayo inuu marin u helo nooca xasilloon ee Android Pie sida uu shaaca ka qaaday Samsung.
Huawei P Smart 2019: Nooca cusub ee nooca dhexdhexaadka ah
Ka raadi wax kasta oo ku saabsan Huawei P Smart 2019, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee cusub ee Huawei horayba si rasmi ah u soo bandhigay.
Nooca cusub ee Bixby wuxuu dhibaato ku keenaa Galaxy S9
Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka waxqabadka ee nooca cusub ee Bixby, kaaliyaha Samsung, uu ku leeyahay Galaxy S9.
LG wuxuu shaaca ka qaaday bilowgiisa 2019
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha LG ee ah inay telefoonno cusub ka soo saaraan suuqa bilaha ugu horreeya ee 2019 iyo faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan.
TV-ga Android-ka waxaa isticmaala tobanaan milyan oo isticmaale ah oo ugu mahad celinaya hawl wadeenada
Adeegsiga Android TV badanaa ka dhex shaqeeya shirkadaha ayaa si aad ah kor ugu kacay sanadihii la soo dhaafay, iyada oo ah OS-ka ay doorbidaan shirkadaha ka shaqeeya fiilooyinka.
Nokia 5.1 Plus wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie
Nooca ugu dambeeyay ee Android ee laga heli karo suuqa, Android Pie ayaa hadda loo heli karaa Nokia 5.1 Plus.
Bixiyeyaasha iyo faahfaahinta xaddidan ee Huawei Y7 (2019)
Roland Quandt ayaa sifeeyey dhowr ka mid ah astaamaha farsamo ee muhiimka ah iyo wax soo saar qaar ka mid ah Huawei Y7 (2019), taleefanka soo socda ee shirkadda.
Donald Trump wuxuu doonayaa inuu xayiro dhamaan iibka ZTE iyo Huawei ee Mareykanka
Labada shirkadood ee Huawei iyo ZTE waxay arki karaan in dhammaan iibinta wax soo saarka isgaarsiinta ee Mareykanka laga mamnuuci doono.
Dodocool iyo Koogeek gorgortan kuma seegi kartid Amazon!
Dhowr waxyaalood oo Koogeek iyo Dodocool ah ayaa lagu iibinayaa Amazon Spain. Midkood ku hel rasiidhada soo socda!
Naqshadda Motorola Moto G7 ayaa la xaqiijiyay
Soo bandhig ayaa la daadiyay taas oo muujineysa nashqadda Motorola Moto G7, oo ah calanka xiga ee qoyska motorola G kaas oo shaashadda ku soo bandhigi doona.
Ugu Fiican Windows 10 Launcher ee Kiniiniyada Android
Video-post oo aan kugula talinayo midka aniga iigu fiican Windows 10 Launcher for Tablets oo leh nidaamka hawlgalka Android.
Kuwani waxay ahaayeen 5 telefoonnada gacanta ee ugu fiican ee lagu soo bandhigay 2018
Ku soo uruurinta mobilada ugu fiican ee lagu soo bandhigay sanadkan gudihiisa 2018 shirkadaha waaweyn: Samsung Galaxy S9, Huawei P20 iyo waxyaabo kaloo badan.
Kani waa e Breeno, kaaliyaha codka ee cusub ee OPPO si uu ula tartamo Kaaliyaha Google
Oppo ayaa hada soo bandhigtay Breeno, oo ah kaaliyaha codka u gaarka ah ee ay rabto inay kula tartanto Google Assistant, Siri iyo Alexa.
Huawei P30 laguma soo bandhigi doono MWC 2019
Huawei wuxuu xaqiijiyay joogitaankiisa MWC 2019 laakiin shirkiisii ​​jaraa'id ee hore wuxuu diirada saari doonaa teknoolojiyada 5G, sidaa darteed ma soo bandhigi doono Huawei P30.
Samsung Galaxy M kii ugu horreeyay ayaa imaan lahaa bisha Janaayo
Ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah inay soo saaraan saddex taleefan oo kala duwan oo cusub oo Galaxy M ah bisha Janaayo.
Faahfaahinta koowaad ee LG G8 ThinQ, sumadda taleefanka 5G ee ugu horreeya?
Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahin cusub oo ku saabsan calanka soo socda ee soo saarayaasha waaweyn ee iftiinka arki doona ...
Waxaa daaha laga qaaday wajiga hore ee Nokia 9 Pureview, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo wata shan kamaradood oo dambe
Waxaa la soo bandhigay muuqaal muujinaya wajiga hore ee Nokia 9, taleefanka soo saaraha reer Finland oo leh shan kaamiro gadaal ah.
Samsung Galaxy S10 waxay lahaan kartaa sameecadaha ku dhexjira shaashadda
Samsung Galaxy S10 wuxuu noqon karaa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa ku dhex jira ee ku hadla dadka ku hadla shaashadda si uu u bixiyo naqshad caato ah.
Honor V20: Taleefanka casriga ah ee cusub oo leh kamarad shaashad ku jirta
Ka raadi dhammaan wixii ku saabsan Honor V20, taleefanka casriga ah ee cusub oo wata kamarad soo-bandhig ah oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha.
Nokia 3 waa la cusbooneysiiyay Android 8.1, ma jiro Android Pie xilligan
Shirkadda laga leeyahay Finland ee Nokia ayaa soo bandhigtay cusbooneysiinta ku saabsan Android 8.1 ee Nokia 3, oo ah terminal sanadkii hore suuqa soo galay.
Asus ZenFone 5 wuxuu cusbooneysiiyaa Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' oo horeyba loogu diyaariyey dadka isticmaala Asus ZenFone 5 websaydhka soo saaraha.
Huawei Pay wuxuu bilaabmayaa ballaarinta Yurub
Adeegga lacag bixinta elektarooniga ah ee Huawei, oo markii hore loo baabtiisay sida Huawei Pay, ayaa hadda laga heli karaa Ruushka, oo ah waddankii ugu horreeyay, Shiinaha ka dib, ee bilaabay.
Waxaan horey u ogaanay qiimaha Galaxy A8s ee Shiinaha
Waxaan horeyba u ognahay qiimaha ay Samsung Galaxy A8s suuqa ku ridi doonaan, qiimaha ka dhigaya ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo.
Samsung waxay muujineysaa goorta Android 9 Pie uu ku imanayo qalabka 24
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhaha ay Android Pie ku gaari doonto wadar ahaan 24 aaladaha Samsung, maaddaama astaantu lafteeda horeyba u xaqiijisay.
Sida loo demiyo xayeysiiska Xiaomi ee MIUI
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad u joojiso xayeysiiska ka muuqda taleefankaaga Xiaomi iyo barnaamijyada nidaamka ku yaal.
Huawei wuxuu dhaafey 200 milyan oo telefoon oo la soo diray sanadka 2018
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tirada taleefannada ay shirkadda Huawei soo dirtay adduunka oo dhan sannadka 2018-ka taasna waxay caddeynaysaa xilligeeda wanaagsan ee suuqa.
Android Pie wuxuu bilaabaa inuu gaaro Galaxy S9 Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee si joogto ah u gaareysa isticmaaleyaasha leh Galaxy S9 waddamada Yurub qaarkood.
Samsung waxay horey u shaqeyneysaa Galaxy Watch Sport
Shirkadda laga leeyahay Kuuriya ee Samsung ayaa bilawday shaqada Galaxy Watch Sport, oo ah nooc isboorti oo ka mid ah Galaxy Watch oo shirkaddu soo bandhigtay bishii Ogosto ee la soo dhaafay.
Berri waxaad horey u sii haysan kartaa Oukitel U25 Pro cusub
Terminaalka cusub ee Oukitel, ee U25 Pro, ayaa hadda lagu sii hayn karaa oo keliya $ 99,99, dallacsiin ayaa la heli karaa illaa Diseembar 31st.
Xiaomi Mi Play: Taleefanka cusub ee nooca Shiinaha
Raadi wax badan oo ku saabsan Xiaomi Mi Play, taleefanka cusub ee heerka gelitaanka ee nooca Shiinaha horay u si rasmi ah u soo bandhigay.
Tani ma noqon doontaa naqshadda Huawei P30 Pro?
Kuwani waxay na tusayaan naqshadda suurtagalka ah ee Huawei P30 Pro, xubinta ku xigta ee soo saaraha Aasiya ee taxanaha P leh 4 kamaradood gadaal ah.
Google Pixel 3 wuxuu noqday taleefankii ugu fiicnaa suuqa oo leh hal kamarad sida laga soo xigtay DxOMark
Google Pixel 3 wuxuu hadda soo maray DoXMark, isagoo gaaray dhibcaha ugu badan ee Apple's iPhone XR, sidaas darteedna noqda taleefanka casriga ah ee ugu fiican oo leh hal lens.
Blackview BV5500, taleefanka xiga ee rugta ka socda shirkadda ayaa hadda daatay
Blackview BV5500 waa taleefanka casriga ah ee soo socda ee shirkadda laga bilaabayo. Munaasabaddan, qaabkeeda iyo astaamaheeda ayaa la soo daadiyey.
Huawei P30 wuxuu suuqa ku dhufan doonaa kamarad gadaal seddex laab ah iyo 5X Zoom oo aan lahayn tayo lumis, sida lagu sheegay warbixin cusub oo dhowaan la faafiyay.
Xanta cusub ee hadda soo ifbaxday waxay sharraxaysaa in Samsung ay diyaarinayso qaab cusub: waa Habeenkii Brigth. Tani waxay u shaqeyn doontaa sawirrada habeenkii bilaa flash.
Hadda waad cusbooneysiin kartaa Xiaomi Redmi Note 3 MIUI 10!
Ma haysataa Xiaomi Redmi Note 3? Hagaag, waxaan kuu keenaynaa war aad u wanaagsan: hadda waxaad ku cusbooneysiin kartaa taleefankaaga Android 9 Pie illaa MIUI 10.
Samsung waxay durba bilowday soo saarida Galaxy S10 sababo la xiriira wax soo saarkeeda oo cakiran
Warbixin cusub ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda Kuuriyada Koonfureed ee Samsumg ay durba bilowday wax soo saar ballaaran oo Galaxy S10s ah.
Shan maalmood ka dib markii la bilaabay, AnTuTu waxay xaqiijineysaa noocyada xusuusta ee Honor V20
AnTuTu ayaa shaaca ka qaaday in Honor V20 lagu heli doono 64GB iyo 128GB cabirrada keydinta. Labada nooc ayaa la filayaa inay soo bandhigaan 6GB RAM.
Kaamirada Samsung Galaxy S10 waxay lahaan doontaa hab habeen xiiso leh
Warbixin cusub ayaa sheegtay in kaamirada Samsung Galaxy S10 ay soo bandhigi doonto Habayn Habeen ah oo balan qaadaya tayada sawirada cajiibka ah
Moto G7 ayaa bixiya oo sifeeya sifooyinka: qaabeynta iyo midabada la kashifay
Motorola's Moto G7 taxanaha ayaa ku dhow in la soo bandhigo. Munaasabaddan awgeed, ayaa la soo saaray afarta nooc ee qoyskan cusub.
Sida loo tirtiro qalabka bluetooth-ga ee la xiriira casrigayaga casriga ah
Haddii aad u malaynayso in la gaadhay wakhtigii nadiifinta iyo ka saarista qaar ka mid ah aaladaha Bluetooth-ka ah ee aynaan mar dambe adeegsan, markaa waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Noocyada Sony Xperia XA3 waa la xaqiijiyay: waxaa laga bilaabi karaa CES ee Las Vegas 2019
Sony waxay soo bandhigi lahayd khadkeeda cusub ee Xperia ZA3. Tani waxaa lagu soo bandhigi doonaa Bandhigga Macaamiisha Elektaroniga ee Las Vegas, maadaama ay hadda la caddeeyay.
Xaqiijiyay: Honor V20 wuxuu yeelan doonaa taageero lagu duubo 960 fps
Boodhadh cusub oo dhawaan shaaca ka qaaday Honor ayaa xaqiijiyay oo si rasmi ah u sheegay in Honor V20 uu noqon doono taleefankii ugu horreeyay ee sumadda leh oo lagu duubo 960fps.
Nokia 8.1 wuxuu bilaabi doonaa inuu helo Android Pie laga bilaabo berri
Xaqiijiyay: Nokia 8.1 ama X7 wuxuu bilaabi doonaa inuu helo cusbooneysiinta Android Pie laga bilaabo berri. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Lenovo Z5 Pro GT Dhibco Cajiib ah Dhibcaha AnTuTu
Liis cusub oo ka socda AnTuTu ayaa shaaca ka qaaday awoodda Lenovo Z5 Pro GT cusub ee tirooyinka: waa taleefanka ugu fiican ee wax soosaara Android oo dhan.
OUKITEL U25 Pro hadda waa rasmi
Toddobaadyadan waxaan kaala hadalnay dhowr jeer oo ku saabsan OUKITEL U25 Pro.
Shirkadda Huawei waxay qorsheyneysaa inay soo dirto 250 milyan oo qalab illaa 2019
Huawei wuxuu shaaca ka qaaday saadaashiisa sanadka 2019: waxay rajeyneysaa inay soo rarto ilaa 250 milyan oo qalab ah. Waxaan idiin soo gudbineynaa warka.
Huawei waxay iibisay in ka badan 65 milyan oo taleefannada Nova ah tan iyo 2016
Huawei ayaa ku dhawaaqday in, tan iyo 2016, ay iibisay in ka badan 65 milyan oo taleefannada casriga ah ee Nova. Waxaan balaarineynaa faahfaahinta.
Samsung Pay waxay na tusi doontaa kaararka aan dooneyno inaan ku bixino marka aan u dhowaanayno akhristaha NFC
Samsung ayaa hadda cusbooneysiisay barnaamijka Samsung Pay ee adeegyadeeda lacag-bixinta wireless-ka ah si loogu daro hawl xiisa badan oo habboon.
Sida loo rakibo Android Pie on Asus ZenFone 5: cusbooneysiintu waxay gaadhaysa bartamaha
Asus waxay soo saartay cusbooneysiinta caalamiga ah ee Android 9.0 Pie ee loo yaqaan 'ZenFone 5', oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan bartamaha. Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad u rakibi karto.
Samsung Galaxy M20 wuxuu noqonayaa taleefanka labaad ee leh batteriga ugu weyn ee shirkadda: 5000 mAh ayaa imanaya
Samsung waxay ku dhowdahay inay soo saarto taleefan casri ah oo leh awood batteri oo aad u weyn, kaasoo noqon lahaa 5.000 Mah Qalabkani wuxuu noqon lahaa Galaxy M20.
Nokia 8 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie
Nokia waa nuuca ugu dambeeya ee ka socda shirkadda HMD ee si rasmi ah u hesho cusboonaysiinta 'Android Pie'.
Taxanaha Galaxy M ee Samsung waa la soo bandhigi karaa si dhakhso leh: Galaxy M10 waa shahaado
Taxanaha Galaxy M ee Samsung ayaa si rasmi ah dhowaan loo soo bandhigi karaa. Hadda, Samsung Galaxy M10 waxaa caddeeyay shirkadda Wi-Fi Alliance.
Naqshadeynta Xiaomi Play ayaa lagu muujiyay sawirro rasmi ah
Naqshaddii oo dhan ee 'Xiaomi Play' waa la daadiyay, iyadoo la muujinayo dhammaan curfaha aaladda iyo sidoo kale faahfaahinta telefoonka qaarkood.
Maamulaha guud ee Lenovo wuxuu wadaagayaa sawirka Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition
Maamulaha shirkadda Lenovo ayaa xaqiijiyay jiritaanka daabacaadda Ferrari ee shirkadda cusub ee shirkadda, waana Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition.
HTC waxay diirada saareysaa taleefannada sare ee qeybta hore ee 2019
HTC waxay xaqiijisay in nuska hore ee 2019, dadaaladeeda ay diiradda saari doonaan soosaarida casriga sare ee casriga ah.
Android 9 Pie wuxuu yimaadaa Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 iyo Mate 10 Pro
Cusboonaysiinta muddada dheer la sugayay ee loo yaqaan 'Android 9 Pie' ayaa ugu dambeyntii timid Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 iyo Mate 10 Pro. Ha ka daahin inaad haysato.
Sida loo rakibo xasilloonida Android Pie ee Xiaomi Mi A2: bartamaha dhexe wuxuu helayaa nooca si rasmi ah
Xiaomi Mi A2 wuxuu bilaabaa inuu ku helo Android Pie si xasilooni leh maanta. Ogow dhammaan faahfaahinta warkan.
Lenovo S5 Pro GT, oo ah nooc kale oo dhexdhexaad ah oo si rasmi ah loo soo bandhigay
Lenovo S5 Pro GT waxaa si rasmi ah loogu sameeyay octa-core Snapdragon 660 chipset, muuqaal farriin FHD + ah, iyo 4/6 GB oo RAM ah. Waan kuu balaarinay!
Lenovo Z5 Pro GT wuxuu si rasmi ah ula shaqeeyaa Snapdragon 855 iyo 12 GB oo RAM ah
Lenovo Z5 Pro GT waxaa si rasmi ah loogu sameeyay Qualcomm's Snapdragon 855 iyo awoodda 12GB RAM ah. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Xiaomi Play, Terminal kale oo ka dusay TENAA oo dhawaan la bilaabi doono
Xiaomi waxay ku dhowdahay inay soo bandhigto taleefan cusub oo casri ah maalmaha soo socda, waana Xiaomi Play. Tan waxaa laga diiwaangeliyey TENAA waxayna imaan doontaa Diseembar 24th.
Lenovo Z5S: Nooc cusub oo heer sare ah oo astaanta u ah shirkadda
Raadi wax badan oo ku saabsan qeexitaanka Lenovo Z5S, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee saaraha soo saaraha, oo hadda si rasmi ah loo soo bandhigay.
Huawei wuxuu dhaafi doonaa 200 milyan oo shixnad ah qalabkeeda ka hor dhamaadka sanadka
Marka la gaaro 25-ka Diseembar ee sanadkan, shirkadda Huawei waxay qorsheyneysaa inay horey u sii dirtay in ka badan 200 milyan oo taleefannada casriga ah, sida ay ku qiyaastay.
HTC Desire 12s: HTC bartamihiisa-dhexe
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka HTC Desire 12s, taleefanka cusub ee loogu talagalay bartamaha-bartamaha oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Naqshadaynta Samsung Galaxy S10 ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah rogayaasha
Tixraacyo taxane ah ayaa na siinaya fikrad ah qaabka naqshadeynta Samsung Galaxy S10 noqon doono iyo dhammaan noocyada suuqa gaari doona.
Huawei P Smart 2019 cusub ayaa yimid: heerka ugu yar iyo Kirin 710 chip oo loogu talagalay 205 euro
Waxaan horeyba u ogaanay dhammaan faahfaahinta Huawei P Smart 2019, taleefan aan ka badnayn 205 euro oo ku habboon qaababka.
Xiaomi waxay diyaarineysaa taleefan cusub oo dhexdhexaad ah: waxay ka mid noqon doontaa taxanaha Redmi 7
Telefoon cusub oo Xiaomi ah ayaa laga diiwaangeliyey keydka xogta ee TENAA: waxay noqon kartaa Redmi 7 Pro, oo ah meel dhexdhexaad ah oo dhowaan la bilaabi doono.
Samsung waxay ku soo bandhigi doontaa taleefankeeda 5G MWC 2019: waxay noqon doontaa nooca ugu horumarsan ee Galaxy S10
Warbixin cusub ayaa xustay in Samsung ay ku shaacin doonto aaladdeeda 5G Mobile World Congress 2019, oo ka dhici doonta magaalada Barcelona ee dalka Spain.
Huawei P30 Pro ilaaliyayaasha shaashadda ayaa tilmaamaya inay ku imaan doonto 'dhibic biyo' ah
Xog cusub oo la helay ayaa shaaca ka qaaday in Huawei P30 Pro uu ku imaan doono buundo-biyood. Tan waxaa lagu andacooday iyadoo ay ugu wacan tahay shaashadda ilaaliyaha oo daatay.
Oukitel U25 Pro Sooc
Hoos waxaan ku tusaynaa waa maxay qeexitaanka terminalka soo socda ee shirkadda Oukitel ay ka bilaabi doonto suuqa: U25 Pro
Kani waa Huawei Nova 4 oo leh kamarad gundhig ah shaashadda
Noocyada 'Huawei Nova 4', taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya soo saaraha Aasiya oo u muuqda kamaraddiisa saddex-geesoodka ah.
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition Faahfaahinta Xayeysiinta Daaha Ka Qaaday Waxay Muujinaysaa Waxay La imaan doontaa 12GB RAM
Xog cusub oo la soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in Lenovo uu leeyahay terminal soo socda oo diyaar ah, waana Lenovo Ferrari SuperFast Edition: wuxuu ku imaan lahaa 12 GB oo RAM ah!
Xiaomi Mi 8 Lite wuxuu bilaabmayaa inuu helo beta-ka Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka 'Android Pie beta' ee loogu talagalay Xiaomi Mi 8 Lite oo horeyba si rasmi ah loogu geeyay Shiinaha.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo dekedda kamaradaha Pixel 3 taleefanno badan oo LG ah
Dekedda Google Pixel 3 Camera ayaa hadda loo heli karaa noocyo kala duwan oo LG ah. Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo.
Sababahan awgood Samsung Galaxy X wuxuu ku kici doonaa 1600 euro
Qiimaha Samsung Galaxy X wuxuu noqon doonaa mid aad u culus, waana sababta aan u sharaxeyno sababaha keenay in qiimaha taleefanka soo socda uu aad u sarreeyo.
Ka faa'iideyso dalabkan Amazon si aad ugu iibsato Huawei P20 Pro qiimaha ugu fiican
Hadda waxaan iibsan karnaa Huawei P20 Pro, mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee leh kamaradda ugu fiican suuqa, qiimo aan dib loo sheegi karin iyada oo ay ugu wacan tahay dalabyada Amazon
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Warp Charge 30, tiknoolajiyada cusub ee xawaaraha degdegga ah ee lagu soo bandhigay OnePlus 6T McLaren Edition hadda la heli karo
Nooca afraad ee Galaxy S10 ayaa la arkay
Xanta dhowaanahan waxay sheeganeysaa in nooca afraad ee Samsung ee soo socota ee soo socota, Galaxy S10 + 5G, la arkay dhawaan.
OnePlus 6 iyo 6T waxay helayaan MIUI 10 oo ku saleysan Android Pie
Soosaarayaasha dhinac saddexaad waxay u suurta geliyeen taleefannada OnePlus 6 iyo 6T inay horey u haystaan ​​MIUI 10 oo ku saleysan Android Pie.
Dib u eegista Poptel P8
Waxaan tijaabinay Poptel P8 imtixaanka, "taleefan qafiif ah" oo wata IP68 iyo shahaadada NFC oo kayar € 100, waa mid hagaagsan hadaad raadineyso qalab labaad oo iska caabiya.
Marka la eego shaashadda rasmiga ah ee Lenovo Z5s, calanka xiga
Dhowr shaah oo rasmi ah ayaa loo daadiyay Lenovo Z5s, oo ah calanka xiga ee shirkadda Shiinaha. Waxay ku imaan kartaa 8 ama 10 GB oo RAM ah.
Samsung waxay ku muujineysaa warka One UI muuqaal ahaan
Soo ogow dhammaan wararka ay Samsung ku soo bandhigeyso muuqaalkeeda cusub ee loo yaqaan 'One UI interface' iyada oo ay ugu mahadcelineyso fiidiyowga ay shirkaddu horey ugu sii dejisay si rasmi ah
Noocyada qarsoodiga ah ee Xiaomi ayaa lagu sifeeyay shabakadda: ma waxay ka imaan doonaan Redmi 7?
Noocyo dhowr ah oo loo maleynayo Xiaomi Redmi 7 ayaa la xaqiijiyay. Borotokoolladooda xamuulku durba waa isku mid. Waanu kugu balaarinay!
Kani waa shaashadda laba-geesoodka ah ee Vivo Nex ee fiidiyowga ah
Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato mobilka cusub ee Vivo ee la soo bandhigay maalmo ka hor, fiidiyowgan oo ay daabacday Ice Universe wuxuu ku tusayaa Nex.
Tijaabinta saacadaha ugu horeeya One UI: 5 wax weyn oo ku saabsan isdhexgalka cusub ee Samsung
Markaad cusbooneysiiso Galaxy S9 ama Galaxy Note 9 illaa One UI oo leh Android Pie waxaad si fudud u ogaan doontaa inaad gacanta ku hayso mobiil cusub.
Kaliya Galaxy S10 Lite ayaa lagu heli doonaa jaalle ahaan
Samsung ayaa bilaabi lahayd midab gaar ah oo loogu talagalay Galaxy S10 Lite: Jaale, midab ah oo kaliya laga heli karo dhamaadka hoose ee khadka S10.
Kani wuxuu noqon doonaa Huawei Nova 4: daloolka shaashadda, xoogaa jibbaarro ah iyo wax badan oo ku saabsan soo socda-sare
Xogo cusub ayaa daaha ka qaaday dhowr sawir oo ka mid ah Huawei Nova 4, waxyar uun ka hor intaan la soo bandhigin oo la soo bandhigin, taas oo noqon doonta bisha Diseembar 17.
Amazon Echo VS Google Home. Haddii aad horay u iibsaneyso mid ka mid ah aaladahaan, eeg tan
Haddii aad ka fekereyso inaad hesho Google Home ama Amazon Echo, isbarbardhigga amazon Echo VS google Home wuxuu noqon doonaa mid aad waxtar u leh.
Xiaomi waxay dib u habeyn ku sameyneysaa gudigeeda maamulka Wang Chuan waa madaxweynaha cusub ee shirkada Shiinaha
Xiaomi waxay dib u qaabeysaa maamulkeeda sare waxayna ku dhawaaqeysaa madaxweyne cusub aagga ganacsiga ee Shiinaha, iyo sidoo kale isbeddelo kale oo jagooyin kala duwan ah.
Zeblaze THOR 4 Plus, taleefan casri ah oo saacad qaali ah ka badan 100 euro
Waqtigan xaadirka ah, waxayna kuxirantahay isticmaalka aan ka sameysano taleefankeena casriga ah, shaqada ama nolosha gaarka ah, waxay u badan tahay in had iyo jeer ...
Sawirada Sharafta 8A ayaa soo ifbaxaya: dhamaadka hoose ee soo socda ee wadada
Sawirada Honor 8A, oo ah taleefanka casriga ee xiga ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay ayaa la shaaciyay. Tani waxay noqotay sidii markii TENAA ay daabacday kadib.
Blu Vivo Go: Taleefannada casriga ah ee cusub ee wata 'Android Go'
Raadi wax badan oo ku saabsan Blu Vivo Go, taleefanka cusub ee dhamaadka-hoose ee la yimaada Android Go oo ah nidaamka hawlgalka suuqa.
Huawei FreeBuds 2: sameecadaha dhagaha ee cusub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan sameecadaha taleefannada gacanta ee nooca Shiinaha, Huawei FreeBuds 2 oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha.
Sida loo rakibo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijka kamaradaha Motorola: waxay timid iyadoo xambaarsan warar
Codsiga kamaradda Motorola waxaa loo cusbooneysiiyay nooc cusub oo lagu rakibayo astaamo cusub, oo ay ku jiraan astaamo iyo shaqooyin cusub.
Telefoon Sharafeed cusub ayaa hadda ka diiwaan gashan TENAA - ma wuxuu noqon doonaa Sharaf Ciyaar 8?
Telefoon casri ah oo cusub oo sharaf ah ayaa hadda laga sameeyay muuqaalka TENAA. Waxay noqon kartaa Sharafta Ciyaar 8, sida loo sheegay.
Sida loo qaado shaashadda Google Pixel 3
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo qaado shaashadda Google Pixel 3 cusub, qodobkan waxaan ku tusaynaa dhammaan hababka la heli karo.
Huawei wuxuu ka shaqeeyaa nidaam maamuus cusub oo SuperCharge dhakhso ah: wuxuu imaan doonaa 2019
Hab maamuus cusub oo xawaare ku shaqeeya Huawei ayaa socda. Midkan ayaa lagu soo bandhigi doonaa taleefannada casriga ah sanadka soo socda.
Flyme 7 Khibrad waxay u timaadaa Meizu 16 iyo 16 Plus si rasmi ah
Meizu horay ayuu si rasmi ah ugu sii daayay Flyme 7 Khibrad Meizu 16 iyo 16 Plus. Kabaabaddan cusub waa nooca la goostay ee Flyme-ka soo socda.
Nokia 8.1 oo leh 6GB RAM ayaa imaan doonta bisha Janaayo
Waxbadan ka ogow noockan gaarka ah ee Nokia 8.1 oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah keyd gudaha ah oo imaan doona bisha Janaayo.
Iibinta taleefannada gacanta ayaa dhici doona sanadka 2018
Ka ogow wax badan oo ku saabsan hoos u dhaca iibka taleefannada casriga ah ee adduunka oo dhan 2018, labada taleefannada Android iyo iOS.
Galaxy S10 iyo S10 Plus waxay lahaan doonaan 3 iyo 4 kamaradood oo gadaal ah siday u kala horreeyaan, marka loo eego kiisaska la baahiyay.
Kadib markii ay soo if baxeen kiisaska rasmiga ah ee ugu horreeya ee Galaxy S10 iyo S10 Plus, waxaa la xaqiijiyay in boosteejooyinkan ay dhabarka ku yeelan doonaan 3 iyo 4 kamaradood.
Tiknoolajiyadda 5G ee Huawei wali waxaa ku kalsoon dalal dhowr ah
Tikniyoolajiyadda 5G iyo qaab-dhismeedka shirkadda Huawei, ee Shiinaha laga leeyahay, ayay weli aaminaan dalal dhowr ah oo adduunka ah, sida ay sheegtay Shiinaha.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo MIUI 10.1 oo leh Pie Android xasilloon Pocophone F1
MIUI 10.1 oo wata qalabka loo yaqaan 'Android 9.0 Pie' ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo Pocophone F1. Waxaan sharaxeynaa sida loo rakibo!
Tani waxay noqon doontaa dareeraha kamaradaha awoodda badan ee Huawei P30 Pro
Xaaladaha qaarkood waa la soo daadiyay, marka lagu daro kaamirada suuragalka ah ee Huawei P30 Pro, halkaas oo aan ku arki karno inay ku dhejin doonto dareenka ugu fiican ee Sony
Faahfaahin dheeraad ah ayaa shaaca ka qaaday oo ku saabsan Huawei Nova 4: 48 MP camera gadaal iyo inbadan
Waxaan dhawaan kuu sheegnay aaladda Huawei ee soo socota, taas oo aan ka ahayn Huawei Nova 4….
Tani waa tirada kamaradaha Galaxy S10 Lite, S10 iyo S10 Plus
Shaandhayn kale oo aan ku ogaan karno tirada saxda ah ee kamaradaha mid kasta oo ka mid ah moodooyinka taxanaha cusub ee Galaxy S10.
Falanqaynta tamarta nidaamka 'Smart Sistem Smart 6 headphones'
Waxaan tijaabinay Nidaamka Tamarta Sistem Smart 6, sameecadaha dhagaha oo isku daraya qaab "retro" ah oo soojiidasho leh teknolojiyaddii ugu dambeysay ee Codka Kaaliyaha
Qalabka 'Pie beta' ayaa hadda loo heli karaa OnePlus 5 iyo OnePlus 5T
OnePlus ayaa hadda sii daayay beta Pie beta-kii ugu horreeyay ee OnePlus 5 iyo OnePlus 5t iyada oo loo marayo barnaamijkeeda beta.
Ku hel Oukitel C11 Pro kaliya $ 69,99
Kirismaska ​​waa waqtiga sanadka oo adeegsadayaal badani ka faa'iideystaan ​​inay cusboonaysiiyaan boosteejooyinkooda. Sanadka oo dhan…
Qiimaha taleefannada gacanta ayaa ku kordhin doona Isbanishka iyada oo la adeegsanayo aaladda cusub ee dijitaalka ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan kor u kaca qiimaha moobilka ee Isbaanishka iyada oo ay ugu wacan tahay buugga cusub ee dijitaalka ah ee hadda shaqeynaya.
Bixby horeyba wuxuu ugu hadlaa Isbaanishka si rasmi ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta soo gaadhay Bixby, kaaliyaha Samsung, taas oo ay ugu wacan tahay hadda inay ku hadasho Isbaanishka.
The OnePlus 6T McLaren Edition hadda waa rasmi
OnePlus 6T McLaren Edition: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan daabacaaddan gaarka ah ee dhammaadka sumadda.
Nokia 7 wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta 'Android Pie'
Nokia 7 wuxuu dhawaanahan helayey casriyeynta loo yaqaan 'Android 9.0 Pie' ee Shiinaha. Waxaan balaarineynaa faahfaahinta!
Vivo Nex Dual Display: Taleefanka cusub ee labada shaashad leh
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Vivo Nex Dual Display, taleefanka cusub oo leh laba shaashad iyo kamarad saddex-laab ah oo ka socota astaanta Shiinaha, horay loo soo bandhigay
Iibinta OnePlus 6T waxay dhaaftay OnePlus 6 249%
Iibinta OnePlus 249T ayaa kordhay 6% marka loo eego OnePlus. Guul weyn oo aad u yeelan karto inaad ka degto Mareykanka.
Oukitel K7 Power, oo leh batari 10.000 mAh ah, oo lagu iibinayo kaliya $ 99,99
Haddii aad ka fekereyso inaad cusbooneysiiso taleefankaagii hore, waxay u badan tahay in dalabka ay Oukitel na siiso uu xiiso noo yeelan doono.
Huawei Raaxo 9: Nooca noocyada cusub ee heer-gelitaanka
Huawei raaxayso 9: qeexitaanada, qiimaha iyo bilaabida. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocyada cusub ee gelitaanka ee nooca Shiinaha horay loo soo bandhigay.
ZTE wuxuu soosaarayaa nooc cusub oo ah Nubia X oo leh 512 GB xasuus ah, waana soo-uruuriyaha daabacaadda
Nubia X Collectors Edition waxaa hadda laga soo saaray Shiinaha oo leh 512GB keyd gudaha ah iyo midab cusub oo kala duwan.
Qalabka nabadgelyada ee bisha Diseembar ee Samsung Galaxy S9 + ayaa hadda la heli karaa
Cusboonaysiinta amniga bisha Diseembar ee Samsung Galaxy S9 + hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo.
Honor V20 wuxuu ku imaan doonaa kamarad gadaal ah 48 megapixel
Honor V20 ayaa la xaqiijiyay inuu yahay taleefankii ugu horeeyay ee dunida la yimaada isagoo wata kamarad gadaal ah 48-megapixel, wuxuuna noqon doonaa 26-ka bisha December.
Vivo Y93s: astaamaha, qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka bartamaha cusub ee la bilaabay
Vivo Y93s ayaa hadda si rasmi ah loogu shaaciyay Shiinaha dhex dhexaad ahaan iyadoo Mediatek ay leedahay Helio P22 iyo in ka badan. Ogow wax walba oo isaga ku saabsan.
Japan ayaa ka reebtay Huawei iyo ZTE mashruuca 5G sababo amaan awgood
Japan waxay go’aansatay isniintii inay si wax ku ool ah uga saarto Huawei Technologies iyo ZTE soo iibinta dadweynaha ee mashaariicda 5G ee dalka.
Galaxy A8s: Samsung kii ugu horreeyay ee leh kamarad soo-bandhig ah
Raadi wax badan oo ku saabsan Samsung Galaxy A8s, taleefankii ugu horreeyay ee suuqa ku yaal oo leh kamarad hore oo ku dhex jirta shaashadda. Lagu baray maanta.
Samsung Galaxy A7 (2018) wuxuu ku dhex socdaa Geekbench oo wata Android Pie
Samsung Galaxy A7 (2018) ayaa hadda ka soo muuqday Geekbench oo ku shaqeynaya Android 9.0 Pie. Goor dhow ayaan helayaa cusboonaysiinta.
OUKITEL U25 Pro: Taleefan cusub oo saameyn ku leh websaydhka
Ka raadi wax walba oo ku saabsan OUKITEL U25 Pro, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka soo baxa Shiinaha, kaas oo la bilaabi doono bishaan suuqa.
Nooca xasilloon ee Android Pie wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Xiaomi Mi A1
Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaanshaha nooca xasilloon ee Android Pie ee Xiaomi Mi A1, dhowr maalmood ka dib markii beta uu yimid taleefanka.
Huawei P Smart (2019) ayaa ka muuqda Geekbench oo wata 'Android Pie'
Huawei P Smart (2019) wuxuu ku marayaa Geekbench oo leh Android 9.0 Pie oo ah nidaamka hawlgalka. Baro faahfaahinta daadigan.
Hisense wuxuu ka diiwaan galiyay qaab cusub TENAA: kuwani waa astaamahiisa iyo tilmaamtiisa
Hisense waxaa laga yaabaa inuu dhawaan ku dhawaaqo taleefan casri ah oo cusub, maadaama liis cusub uu hadda ka soo muuqday websaydhka TENAA.
Samsung Galaxy A8s wuxuu ka shahaaday TENAA oo leh 8 GB oo RAM ah iyo kamarad saddex geesood ah
Samsung Galaxy A8s waxaa caddeeyay shirkadda TENAA. Dhowr ka mid ah qeexitaankiisa ayaa lagu faahfaahiyey liistada, sida 8 GB oo RAM ah iyo kamaradda saddex-geesoodka ah.
Xaqiijiyay: OnePlus 6T McLaren Edition wuxuu lahaan doonaa 10 GB oo RAM ah iyo tikniyoolajiyad si dhakhso leh loogu soo dallaco
Daadinta cusub waxay soo jeedineysaa in OnePlus 6T uu suuqa ku dhufan doono 10GB oo RAM ah iyo tikniyoolajiyad dhaqso badan oo dhaqso leh oo ka duwan tii hore ee OnePlus 6T.
Vivo Nex 2 Leaks on Geekbench Kahor Launch: SD845, 10GB RAM iyo Macluumaad Dheeraad ah ayaa la muujiyay
Vivo Nex 2 waxaa lagu soo daadiyay Geekbench oo ay weheliso astaamaha farsamo ee ugu muhiimsan iyo astaamaha. Waan kuu balaarinay!
Samsung waxay xayeysiineysaa muuqaalka guud ee taleefannada mustaqbalka bilaa beel
Patent Samsung cusub ayaa soo muuqday. Tani waxay ka kooban tahay diiwaangelinta taleefannada iyada oo aan wax shucuur ah lahayn. Shaashadda soo baxdaa waa mid quusinaysa.
Rasmi: Vivo Nex 2 waxaa la bilaabi doonaa 12-ka Diseembar
Vivo waxay isu diyaarineysaa inay soo saarto Vivo Nex 2, mobilada ku guuleysan doona ifafaalaha hadda jira. Munaasabadda daahfurka waxay noqon doontaa 12-ka Diseembar.
Dib u eeg Huawei Mediapad M5 Lite tabta leh Stylus oo aan waxba ka hinaasin iPad-ka. Hagaag haa, qiimaheeda!
Munaasabadan, marka lagu daro inay kuu keento dib u eegista fiidiyowga oo dhameystiran ee Huawei Mediapad M5 Lite, kiniin cusub oo Android ah ...
Nooca 5G ee Nubia X ayaa lagu dhawaaqi doonaa Diisambar 10
Nubia waxay soo bandhigi doontaa daabacaadda 5G ee Nubia X bisha Diseembar 10, sida ku cad warqad rasmi ah oo dhowaan shaaca ka qaaday agaasimaha guud.
HMD Global ayaa shaaca ka qaaday iibinta taleefanka Nokia labadii sano ee la soo dhaafay
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka ay Nokia ku haysatay adduunka oo dhan labadii sano ee la soo dhaafay sida ay xaqiijisay HMD Global
Qalabka Android Pie beta wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Xiaomi Mi A1
Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka 'Android Pie beta' ee loo yaqaan 'Xiaomi Mi A1', jiilkii ugu horreeyay ee sumcadda Shiinaha ee leh Android One.
Nokia 3.1 Plus ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Nokia 3.1 Plus ee Spain, qiimaha uu yeelan doono iyo dukaamada aad ka iibsan karto taleefanka.
Xiaomi waxay muujineysaa waayo-aragnimada wicitaanka fiidiyowga ee 5G oo leh nooca 5G ee Mi MIX 3
Xiaomi waxay muujineysaa waayo-aragnimada wicitaanka fiidiyowga ee 5G ee Mi MIX 3 5G munaasabad ka dhacday Shiinaha. Waxaan balaarineynaa faahfaahinta tan!
Xaqiijiyay: OnePlus wuxuu soo saari doonaa taleefankii ugu horreeyay ee 5G oo leh Snapdragon 855 horraanta 2019 Yurub
Sida laga soo xigtay OnePlus, taleefanka casriga ah ee ugu horreeya Yurub waxaa soo saari doonta isla shirkaddaas. Waxay ku imaan doontaa Snapdragon 855, magac kale, iyo horaanta 2019.
Samsung Galaxy A50 wuxuu marayaa Geekbench oo uu la socdo Exynos 9610
Samsung Galaxy A50 waxaa laga diiwaan galiyay keydka Geekbench oo ay weheliso processor sare oo dhexdhexaad ah oo Exyos 9610 ah.
Maamuus si loo soo bandhigo taleefanka casriga ah ee kamaradda shaashadda bisha Janaayo
Soo ogow taariikhda lagu soo bandhigi doono taleefanka cusub ee Sharafta leh, kaas oo ku imaan doona iyada oo kamarad isku dhafan shaashadeeda.
Qalabka 'Pie beta' wuxuu yimaadaa BQ Aquaris X2 Pro iyo Aquaris X2
Raadi wax badan oo ku saabsan qalabka 'Pie beta' ee imanaya BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro, noocyada taleefannada Android One.
Nokia 8.1: Qiyaasta cusub ee heerka dhexe ah ayaa hada rasmi ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Nokia 8.1, taleefanka cusub ee dhexe ee Nokia oo si rasmi ah loo soo saaray. Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabista.
Samsung ayaa sii ahaan doonta kafaala qaade rasmi ah ciyaaraha Olambikada 10 sano oo kale
Shirkadda laga leeyahay Kuuriya ee Samsung ayaa sii wadi doonta inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee kafaala qaada Ciyaaraha Olambikada 10 sano oo kale.
Rasmi: Nubia Z17 ayaa heli doonta Android Pie dhowaan
Ugu dambeyntii waa la xaqiijiyay: ZTE's Nubia Z17 wuxuu heli doonaa cusbooneysiinta Android 9.0 Pie dhowaan, inkasta oo aan la ogeyn goorta saxda ah.
Meizu C9, oo si rasmi ah loo bilaabay bilow-hoose oo leh shaashad 18: 9 iyo ka badan
Meizu C9 horeyba waa rasmi. Ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo, qiimaha iyo helitaanka noocyadan hoose ee cusub.
Meizu M6T, casriga casriga ah oo leh tayo / qiimo aad u fiican
Meizu M6T ayaa si rasmi ah looga bilaabay India. Ogow astaamaheeda, qeexitaankiisa farsamo, qiimaha iyo helitaankiisa.
Madaxweynaha Xiaomi wuxuu tilmaamayaa soo bandhigida taleefan leh kamarad dhan 48 MP
Xiaomi ayaa soo saari doonta taleefan casri ah oo leh kamarad 48-megapixel ah iyo laba nal oo toosh ah oo dhinaca dambe ah, sida lagu sheegay teaser uu daaha ka qaaday madaxweynaha.
Apple waxay ka shaqeyneysaa nooc ka mid ah Apple Music ee kiniiniyada Android
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay waxay dooneysaa inay kordhiso tirada dadka isticmaala Android waxayna ku dhowdahay inay soo bandhigto nooc la jaan qaada kiniiniyada ay maamusho Android
10-ka Telefoon ee ugu awooda badan Nofeembar 2018, Sida laga soo xigtay AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keentay qiimeynta 10-ka taleefan ee casriga ah ee ugu awooda badan bisha November ee sanadkan. Waan ku tusaynaa!
Sida loo rakibo MIUI 10.1 oo leh Android Pie deggan Xiaomi Mi 8 iyo Mi 8 Explorer: cusbooneysiintu waxay gaadhay labadan
Xiaomi waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Mi 8 iyo Mi 8 Explorer oo la socota EMUI 10.1.2 oo ay weheliso xasilloonida Android 9.0 Pie.
Dib u eeg BLU VIVO XI +
Waxaan tijaabinay BLU VIVO XI +, laba kamaradood, 6GB oo RAM ah, aqoonsi wajiga ah iyo waxyaabo kale oo badan, oo ah dusha sare ee ugu hooseeya wax kayar € 300
Shirkadda Huawei waxay qorsheyneysaa inay soo dirto 200 milyan oo qalab caalami ah sanadka soo socda
Shirkadda Huawei waxay qorsheyneysaa inay soo rarto qiyaastii 200 milyan oo qalab ah oo la gashado sanadka soo socda. Xiaomi, dhinaceeda, waxay sidoo kale rajeyneysaa inay kordhiso rarkeeda.
Galaxy Note 9 wuxuu bilaabaa inuu helo beta-ka Android 9 Pie oo leh One UI
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qalabka 'Android Pie beta' ee loo yaqaan 'One UI' cusub oo bilaabaya inuu ku gaaro dadka isticmaala Galaxy Note 9.
Ciidanka Cirka ee Netherlands waxay u doortaan Galaxy S9 Enterprise Edition shaqaalaheeda
Nooca ganacsiga ee Galaxy S9 wuxuu noqday doorashada Ciidamada Cirka ee Netherlands.
Sidee loo ogaadaa nooca marin u helida barnaamijyada lagu rakibay taleefankeena casriga ah
Waxaan ku tusineynaa sida aan ku ogaan karno marwalba ogolaanshaha barnaamijyada lagu rakibay qalabkeena.
The Honor Magic 2 wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo kuu oggolaanaya inaad ku ogaato kalooriyada cuntadaada ku jirta
The Honor Magic 2 wuxuu helayaa cusbooneysiin badan tan iyo markii la bilaabay, mid walbana kan kale wuu ka fiican yahay kan kalena ...
Android Pie ayaa dib loo dhigay Nokia 8, laakiin imaatinkiisa ayaa dhow
Cusbooneysiinta Android Pie ee Nokia 8 ayaa dib u dhacday, laakiin Juho Sarvikas, oo ah madaxa Nokia, ayaa sheegay inuu imaan doono, sidii la filayay.
Vingrup, oo ah kooxda tiknoolajiyadda ugu weyn ee Vietnam, ayaa la wareegtay aqlabiyadda BQ
Ogow wax badan oo ku saabsan hawlgalka oo macnaheedu yahay in 51% BQ ay u gudubto gacmaha Vingrup, oo ah kooxda tiknoolajiyadda ugu weyn ee Vietnam.
GaNFast kuleylka cusub ee AUKEY ku xir xireyaasha xawaaraha
Soo ogow wax kasta oo ku saabsan noocyadan cusub ee GaNFast xeedho xawli leh oo degdeg ah oo AUKEY soo bandhigto si aad uga dallacdo moobilkaaga si dhakhso ah.
YouTube-ka wuxuu dhaafey 5.000 oo bilyan oo laga soo dejistay Dukaanka Play-ka
Codsiga fiidiyowga ee YouTube-ka ayaa hadda gaadhay 5.000 oo milyan oo soo degsiin ah, kaliya wuxuu ku yaal Android Play Store.
Qeexitaanka iyo sawirada Huawei raaxada 9 ayaa daadanaya kahor intaan la bilaabin
Huawei raaxada 9 waxaa lagu daadiyay sawirro ay la socdaan qeexitaankiisa farsamo. Waxay noqon doontaa kala duwanaanta heerka ee ku raaxeyso 9 Plus.
Kani waa Samsung Galaxy S10 Plus: jaangooyooyin cusub ayaa shaandheeya naqshadeeda iyo 5 kamaradaha
Kuwani waxay muujinayaan Samsung Galaxy S10 Plus maadaama ay suuqa ku dhici doonto. 5 kaamiro, nooca Infinity-O iyo wax ka badan.
Huawei Nova 4 horeyba waxay u leedahay taariikh soo bandhigid ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida Huawei Nova 4, taleefanka sumadda Shiinaha oo leh kamarad gundhig ah shaashadeeda oo dhici doonta bishan.
Huawei Mate 20 X ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Spain ee Huawei Mate 20 X, casriga casriga ee Shiinaha. La heli karo toddobaadkan.
Abka ugufiican ee looga daawado Megadede sanduuqaaga TV-ga sidii oo uu yahay TV-ga Android
90% barnaamijyada Shiinaha waxay ururiyaan xogta isticmaalaha
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xogta ay ururiyeen qaar ka mid ah barnaamijyada Shiinaha sida ku cad daraasad laga sameeyay dalka.
Faransiiska wuxuu ogaadaa 8 taleefan oo soo saaray shucaac aad u badan
Ogow wax badan oo ku saabsan tirada taleefannada laga helay Faransiiska si ay u sii daayaan heer shucaac ka sarreeya inta la oggol yahay.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa Asus ZenFone Max Pro M2 iyo ZenFone Max M2
Dhowr maalmood ka hor, macluumaad muhiim ah oo ku saabsan taleefannada soo socda ee Asus ayaa la daadiyey. Tan iyo markaas, warshaddii ...
Taleefanka soo socda ee Vivo ayaa si buuxda loogu soo daadiyay sawirrada: nooc cusub oo soo galitaan ah ayaa imanaya
Casriga casriga casriga ah ee Vivo ayaa shahaado ka helay NCC-da Taiwan - dhamaadka-hoose ee cusub ayaa imanaya.
Kiiska khaaska ah ee leh 5 kamaradood oo Google u sameeyay si loo wanaajiyo qaabka sawirka ee Pixels
Xaaladdaas oo leh 5 kamaradood ayaa awood u yeelatay inay bixiso macluumaadka lagama maarmaanka ah si Xaaladda Sawirka ee Pixel 3 loo hagaajiyay.
Nokia 8.1 wuxuu marayaa Geekbench oo muujinaya kartidiisa
Maalmo ka hor waxaan ku tusnay dhamaan sirta naqshadeynta iyo astaamaha Nokia 8.1. Taleefanka casriga ee xiga ee soo saaraha ...
Sida loogu soo dejiyo WhatsApp kiniin si rasmi ah
Sugitaan dheer kadib waxaan aakhirka soo dejisan karnaa oo ku rakibi karnaa WhatsApp kiniin ahaan si rasmi ah iyadoo loo marayo dukaanka arjiga Google.
Xaqiijiyay: Huawei wuxuu ka shaqeynayaa beddel ka ah Android
Waa rasmi: Huawei waxay xaqiijisay inay ku shaqeynayaan nidaamkooda hawlgalka, oo ka duwan kan Android. Soo ogow sababaha.
OnePlus 3 iyo 3T Waxay Heshaa Cusbooneysi Cusub oo Keenaya Iswaafajinta Rasaasta Nooca-C-da iyo Inbadan
Qaybinta cusboonaysiinta cusub ee OnePlus 3 iyo OnePlus 3T ayaa bilaabantay. Cusbooneysiintu waxay imaaneysaa sida OxygenOS 5.0.7.
La xaqiijiyay: Oppo in lagu soo bandhigo taleefanka casriga ee laaban karo ee MWC19
Rasmi: Sida uu sheegay agaasimaha guud ee Oppo, shirkaddu waxay ku soo bandhigi doontaa taleefan gacmeed isku laaban bandhigga Mobile World Congress 2019 ee carwada.
Patent wuxuu muujinayaa nooc kale oo Samsung Galaxy X ah
Patent Samsung cusub ayaa muujinaya aalad leh nashqad aad ula mid ah Samsung Galaxy X laakiin leh laba shaashad oo ku xidhan magnetism
The OnePlus 6T McLaren Edition wuxuu ku imaan lahaa 10 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo ah xusuusta gudaha
Warbixin cusub ayaa soo jeedinaysa in taleefannada casriga ah ee OnePlus, OnePlus 6t McLaren Ediion, ay suuqa la gali doonaan 10GB RAM iyo 256GB oo ROM ah.
Moto G7 Power waxaa lagu caddeeyay batari 5000 mAh iyo in ka badan
Motorola's Moto G7 Power waxaa cadeeyay FCC oo leh 5,000 mAh oo awood batteri ah iyo inbadan. Sida dhammaan faahfaahinta la helay.
Sida loogu xanaaneeyo gurigaaga aaladaha Smart Life ee ku baxa qarash aad u yar
Android 9.0 Pie wuxuu ku sii dhowaanayaa Nokia 8: imaatinkiisa ayaa dhow
Nokia 8 ayaa lagu sii daayay Geekbench, iyadoo loo adeegsanayo Android 9 Pie nidaamka qalliinka: soo dhaweyntiisu waa soo dhowdahay. Waanu kugu balaarinay!
Sida loo rakibo nooca xasilloon ee MIUI 10 ee loo yaqaan 'Xiaomi Mi 5S Plus': lakabka cusub ayaa ku soo dhacaya mobilka
Hadda waad soo dejisan kartaa oo aad rakibi kartaa nooca xasilloon ee MIUI 10 ee Xiaomi Mi 5s Plus: waxaan kuu sharraxeynaa nidaamka ay tahay inaad sameyso.
Shaandheeyey dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha Nokia 8.1
Sawirro taxane ah oo saxaafadeed ayaa la soo dusiyay halkaas oo aan ka arki karno dhammaan faahfaahinta Nokia 8.1 toddobaad ka hor soo bandhig rasmi ah.
Tani waa sida LG ay ugu talagashay inay ku soo ceshato natiijooyinka liita ee qaybta mobilada
LG waxay go’aansatay inay isbadal ku sameyso qeybaha taleefanka si dib loogu soo nooleeyo iibinta taleefoonada casriga ah oo hoos u dhacay sanadihii la soo dhaafay.
Realme U1, taleefankii ugu horreeyay ee leh processor-ka Helio P70 oo ka socda Mediatek, ayaa hadda rasmi ah
Realme U1 hadda waa rasmi. Baro dhammaan sifooyinka, noocyada, qiimaha iyo helitaanka taleefanka ugu horreeya adduunka ee Helio P70!
UMIDIGI One Max, oo ah taleefanka casriga ah ee shirkadda ay la socoto Helio P23
UMIDIGI One Max durbaba waa rasmi: ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo, qiimaha iyo helitaanka qalabkan cusub.
Ciyaarta Nubia Red Magic Mars waxay noqoneysaa mid rasmi ah 10 GB oo RAM ah iyo wax ka badan
Nubia Red Magic Mars waa durbaba rasmi ah: ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamada, qiimaha iyo helitaanka mobilka cusub ee ciyaaraha.
Waxaad hadda ku rakibi kartaa Android 9 Pie beta Samsung Galaxy S9-kaaga Spain
Kuwa idinka mid ah ee haysta Samsung Galaxy S9 hadda waxay ku raaxeysan karaan Android 9 Pie maadaama beta-ka la heli karo laga bilaabo maanta.
Galaxy wuxuu yeelan doonaa ciyaaro gaar ah: Samsung waxay maalgashan doontaa Niantic
Soo ogow heshiiska u dhexeeya Samsung iyo Niantic halkaasoo istuudiyaha uu ku soo saari doono ciyaaro gaar ah taleefannada Samsung Galaxy.
Sida loo cusbooneysiiyo Motorola One ilaa Android 9 Pie
Motorola One ayaa layaab ku noqotay isagoo ah mid ka mid ah bartamihii ugu horreeyay ee soo gaara Android 9 Pie, si uu ugu raaxeysto faa'iidooyinka Google OS-da cusub.
OnePlus iyo McLaren ayaa u wada shaqeynaya dib u habeynta OnePlus 6T
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida OnePlus 6T ee la bilaabay iyada oo lala kaashanayo McLaren sida ay ku dhawaaqday astaanta Shiinaha.
Soosaarayaasha Sony Xperia XZ4 waxay xaqiijinayaan naqshadeynta
Renders ayaa la daadiyay iyagoo muujinaya naqshadda Sony Xperia XZ4, sumadda soo socota ee Sony ee u taagan kamaraddeeda dambe ee saddex-geesoodka ah.
Lenovo K5X, waa terminal cusub oo xaday oo aad isugu dhow
Dhowr xog oo xaday Lenovo K5X-ka ayaa soo ifbaxaya, terminaal dhexdhexaad ah oo ku dhow in la soo bandhigo, iyo ka hor dhamaadka sanadka.
Isticmaalayaasha Huawei waxay leeyihiin lacag ka badan kuwa isticmaala Apple, daraasad cusub ayaa heshay
Daraasad cusub oo la soo saaray ayaa daaha ka rogtay in dadka isticmaala Huawei ama noocyada kale ee Shiinaha ay leeyihiin dakhli bille ah oo ka badan kuwa iPhone.
Samsung Galaxy S10 Plus wuxuu marayaa AnTuTu oo leh Exynos 9820
Samsung Galaxy S10 Plus wuxuu soo maray AnTuTu Exynos 9820 iyo qeexitaano kale. Waxay noqon doontaa mid ka mid ah taleefannada ugu awoodda badan sanadka 2019.
Huawei Mate 20 Pro wuxuu maraa tijaabada sirdoonka ugu caansan
Soo ogow sida Huawei Mate 20 Pro uu u maro baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Ogow haddii taleefanku ka gudbo imtixaanka iyo in kale.
Samsung Galaxy A8s, ayaa sifeeyey astaamaheeda
Astaamaha Samsung Galaxy A8s ayaa la soo daadiyey, calanka cusub ee qoyska A8 ee u taagan kor u qaadista shaashadda Samsung Galaxy S10.
Xiaomi Mi 8 SE wuxuu la muuqdaa Android Q on Geekbench: waxay heli doontaa cusbooneysiinta marka OS la sii daayo
Xiaomi Mi 8 SE ayaa ka soo muuqday Geekbench oo wata nidaamka hawlgalka ee Android Q.Marka noocan Android ah la sii daayo, waad heli lahayd.
Naqshadaynta Vivo Nex 2 oo lagu soo bandhigay shaashad labalaab ah
Masawirro taxane ah ayaa lasoo daadiyay oo muujinaya naqshadda Vivo NEX 2, oo ah qalab u muuqda mid aan lahayn darajo iyo shaashadda dambe.
[APK] Sida loo rakibo kamaradda Pixel 3 ee Xiaomi Mi A1
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida loo rakibo kamaradda Pixel 3 ee Xiaomi Mi A1 si aad ugu raaxeysato faa'iidooyinka barnaamijka.